မလွတ်မြောက်ခြင်း မှတ်တမ်း(၂၄ ရက်နေ့) – Gniap
ရှေ့ (၂) ရက်က စာမရေးဖြစ်ဘူး။ အပြီးသတ်ရမယ့်အလုပ်တွေ ရယ် ၊ ညကင်းစောင့်ရတဲ့ ရက်ရယ် ဖြစ်နေလို့။ နှစ်ငါးလုံး(၂၂၂၂၂) ပြည်လုံးကျွတ်သပိတ်မှာတော့ မြန်မာပြည်သူ သန်းနဲ့ချီပီး လမ်းမပေါ်ထွက်လာကြတယ်လို့ သတင်းစာတွေက ရေးကြတယ်။ နေပြည်တော်မှာ လူရာနဲ့ချီပီး အဲဒီနေ့မှာပဲ အဖမ်းခံရတယ်။ Facebook friend ဖြစ်နေတဲ့ UCSM က မိန်းကလေးတစ်ယောက်တောင် ပါသွားသေးတယ်။ ပြန်လွတ်လာပီလို့ ဒီနေ့ စတေးတပ်ဖတ်လိုက်ရပေမယ့် ဆိုင်ကယ်တွေ ဖုန်းတွေတော့ ပြန်မရသေးဘူးတဲ့။ စစ်တပ်ဘက်ကတော့ CDM ကို ဖိနှိပ်တဲ့အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို အင်အားသုံးပီး ဖမ်းဆီးတာ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွေ ထုတ်ပီး ခြိမ်းခြောက်တာတွေကိုတော့ ဆက်တိုက်လုပ်နေတယ်။ စစ်တပ်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး ၊ MRTV နဲ့ MRTV Live Facebook Page တွေကိုတော့ Facebook ကနေ ဖြုတ်ချလိုက်လို့ အခု စစ်ကောင်စီ ဆိုတဲ့ page အသစ်ထောင်နေလေရဲ့။
CRPH ကနေ ဒေါက်တာဆာဆာ ကို ကုလသမဂ္ဂ သံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်တာရယ်၊ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်သူ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ကနေ အနားယူတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေက လူပြောများနေတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး လုပ်ပေမယ့် ပြစ်တင်ရှုပ်ချတာတွေပဲ ရှိတာ။ လူတွေမျှော်လင့်သလို စစ်ရေး အရေးယူဖို့ဆိုတာက ၈၈ တုန်းကလဲ မလွယ်ခဲ့သလို အခုလဲ လွယ်မယ့်ပုံတော့ မပေါ်ဘူး။ စစ်တပ်ဘက်ကတော့ ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြလို့ ရနိုင်တဲ့ သံရုံးတွေ ကို အင်အားတွေ လိုက်ချပီး ပိတ်ဆို့နေတယ်။ ၂၂.၂.၂၀၂၁ ရက်မှာ ဆူးလေ ဖွင့်ပေမယ့် ဒီနေ့တော့ ပိတ်ထားပြန်တယ်။ နယ်မြို့တွေမှာတော့ လူတွေအပြည့် ၊ စုရပ်တွေကို ရန်ကုန်လို မတားဆီးနိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ ထူးခြားဖြစ်စဥ်အနေနဲ့ကတော့ အင်ဒို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ထိုင်းမှာ ဝဏ္ဏမောင်လွင် နဲ့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် သွားတွေ့တယ်။ အဲဒီအချိန် ပြည်သူတွေကတော့ ရပ်ကွက်ရုံးတွေမှာ စစ်တပ်ခန့်အုပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးအသစ်တွေကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း ချိတ်ပိတ် ဆန္ဒပြမှုတွေ လုပ်နေကြတယ်။
ထွက်ပေါက် မရှိတဲ့ကြားက ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အနေနဲ့ အမေစု ရဲ့ ၂၀၁၂,၂၀၁၄,၂၀၁၈ လောက်တုန်းက နိုင်ငံတကာမှာ ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ၊အမေးအဖြေတွေကို ပြန်နားထောင်ဖြစ်တယ်။ မှန်/မှား လိုက်ရှာဖြစ်တယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ ပြောခဲ့တာတွေနဲ့ ကိုက်၊မကိုက် ပြန်တွေးမိတယ်။ ငါ ဘာကြောင့် အမေစု ကို ယုံကြည်သလဲ? NLD ကို မဲပေးသလဲ? အဲဒီ အကြောင်းရင်းတွေကို စဥ်းစားဖြစ်တယ်။ အစကတော့ စာအရှည်ကြီးရေးဦးမလို့ပဲ။ မပြည့်စုံမှာစိုးလို့ အခုတော့ မရေးချင်သေးဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ အကြောင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို data analysis လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့တော့ တွေးတယ်။ အချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတုန်းကလဲ သမိုင်းအနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ခဲ့ပီးတော့ အကောင်းတွေကိုပဲ အမှတ်တရ ပြန်ရေးကြတာများတယ်။ သူ့သမီး ခေါင်းဆောင်တဲ့အလှည့်မှာတော့ တိုးတက်နေတဲ့ နည်းပညာနဲ့အညီ လေ့လာသုတေသနပြုဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ NLD ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက တိုင်းပြည်ရဲ့ ၂၀ ရာစု အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်နေတယ်လို့ မြင်လို့ပါ။